Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Psalms 85
Nepali New Revised Version, Psalms 85
1 आफ्‍नो देशमाथि तपाईंले कृपा देखाउनुभयो, हे परमप्रभु, तपाईंले याकूबको सुख-शान्‍ति फर्काइदिनुभयो।
2 आफ्‍ना जनहरूको अधर्म तपाईंले क्षमा गर्नुभयो, तपाईंले तिनीहरूका सबै पाप ढाक्‍नुभयो। सेला
3 तपाईंले आफ्‍नो सबै रोष पन्‍छाउनुभयो, अनि आफ्‍नो दन्‍कँदो क्रोधबाट तपाईं फर्कनुभयो।
4 हे हाम्रा उद्धार गर्ने परमेश्‍वर, हामीलाई पुनर्स्‍थापित गर्नुहोस्‌, र हामीप्रतिका तपाईंको अप्रसन्‍नता हटाइदिनुहोस्‌।
5 के तपाईं हामीसित सधैँ क्रोधित रहनुहुन्‍छ? के तपाईं पुस्‍ता-पुस्‍तासम्‍म हामीसँग क्रोध गरी नै रहनुहुन्‍छ?
6 के तपाईंका प्रजा तपाईंमा रमाऊन्‌ भनेर हामीलाई पुनर्जागृत बनाउनुहुन्‍न?
7 हे परमप्रभु, हामीलाई आफ्‍नो कहिल्‍यै नटुङ्गिने प्रेम देखाउनुहोस्‌, र हामीलाई तपाईंको उद्धार प्रदान गर्नुहोस्‌।
8 परमप्रभु परमेश्‍वरले के भन्‍नुहुन्‍छ, सो म सुन्‍नेछु। उहाँले आफ्‍नो प्रजासँग, आफ्‍ना पवित्र जनहरूसँग शान्‍तिको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्‍छ, तर तिनीहरू फेरि मूर्खतातिर नलागून्‌।
9 निश्‍चय नै उहाँसँग भय मान्‍नेहरूका नजिकै उहाँको उद्धार छ, र उहाँको महिमा हाम्रो देशमा वास गरोस्‌।
10 प्रेम र विश्‍वस्‍तता आपसमा मिल्‍छन्‌, धार्मिकता र शान्‍तिले एक-अर्कोलाई चुम्‍बन गर्छन्‌।
11 धरतीबाट विश्‍वस्‍तताको अङ्‌कुर निस्‍कन्‍छ, र धार्मिकताले चाहिँ स्‍वर्गबाट तल हेर्दछ।
12 जे असल छ, परमप्रभुले त्‍यही दिनुहुनेछ, र हाम्रो जमिनले फसल उमार्नेछ।
13 धार्मिकताचाहिँ उहाँको अगिअगि जान्‍छ, र उहाँको निम्‍ति एउटा मार्ग तयार गर्छ।
Psalms 84 Choose Book & Chapter Psalms 86